အမျိုးသမီးအင်္ဂါကို မလုပ်သင့်သည့်အရာများ (ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးပါသည်) – Messi Club
အမျိုးသမီးအင်္ဂါကို မလုပ်သင့်သည့်အရာများ (ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးပါသည်)
(၁) ပြွတ်နဲ့ထိုးသွင်းပြီး ရေမဆေးရ
တစ်ချို့က Douching Advice (ရေပြွတ်ကဲ့သို့သော)အရာများသုံးပြီး ယောနိအတွင်းပိုင်းကို ထိုးသွင်းကာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြပါတယ်။ ပိုးသတ်သန့်စင်ထားကြောင်း ကြေငြာထားရင်လည်း အသုံးပြုဖို့ မသင့်ပါဘူး။ သားအိမ်အတွင်းပိုင်းဟာအရမ်းနူးညံပြီး pH ပမာဏလွန်ကဲတဲ့ ရေနဲ့ တွေ့ရင် ပျက်ဆီးတတ်သလို အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်
(၂) လက်ဖြစ်ဆေးဝါးများ မသုံးရ
တစ်ချို့တွေက ရာသီလာတဲ့အခါမျိုးမှာ အင်္ဂါရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေဖို့ ပေါင်းမြက်နဲ့ အုံခြင်း၊ လက်ဖက်ခြောက်အဖန်ရည်နဲ့ ဆေးခြင်း၊ ရေခဲသွင်းခြင်းများ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါတွေကို လုံးဝ ရှောင်ရှားရမယ်ဆိုတာာ အမျိုးသမီးတိုင်း သိစေချင်ပါတယ်
(၃) အရာဝတ္ထုများနဲ့ ကျဉ်းမြောင်းအောင် မပြုလုပ်ရ
လင်ယောက်ျားရဲ့ အလိုကိုလိုက်ပြီး အရာဝတ္ထု၊ ဖော့၊ စက္ကူအစရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေသုံးပြီး လမ်းကြောင်းကျဉ်းမြောင်းအောင်လုပ်ခြင်း၊ ကျောက်ချဉ်ကဲ့သို့သော အရာများ လိမ်းခြင်းဟာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကိုတောင် ဖြစ်စေနိုင်သည်အထိ ဖြစ်စေပါတယ်။
(၄) ပရဆေးများ မသုံးရ
ပရဆေးတွေနဲ့ ဟုတ်နိုးနိုးဖြင့် အင်္ဂါကို လိမ်းခြင်း၊ မိမိဘာသာ တက်သလောက် မှတ်သလောက် လုပ်ခြင်းတွေကို ရှောင်ရပါမယ်။ ရောဂါဆိုးတွေ ပေးတဲ့အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အတူနေပီး ချက်ချင်းအပေါ့သွားတာကို ရှောင်ရှားရပါမယ်။ အကြောင်းကတော့ ဆီးထဲမှာ အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ရောဂါပိုးတွေ ပါဝင်လို့ လက်လက်ဆက်ဆက် ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာရထားတဲ့ လမ်းကြောင်းကြွက်သားနဲ့ ထိတွေ့ရင် ရောဂါရစေနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို … သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမလဲ … ?
(၁) pH ပမာဏ 4.5 ထက်မနည်း 8 ထက်မပိုသော Feminine Care Product များကို သုံးပါ
Feminine Care Product များကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာလည်း ကျန်းမာရေးစံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသော (ဥပမာ – pH Care ကဲ့သို့) ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်အသုံးပြုပါ။
(၂) ရေနွေးနဲ့ ဆေးပါ
ရေနွေးနဲ့ အပြင်ကနေ သန့်ရှင်းအောင် ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ရေပန်းနဲ့ ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ပန်းပြီးပေါ့။ လက်နဲ့မပွတ်ရင်တောင်အဲဒီနည်းက သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပါတယ်။
(၃) ကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းနဲ့ လျှော်ညီသော လစဉ်သုံးပစ္စည်းကို သုံးပါ
အချို့ပစ္စည်းတွေဟာ ရောင်းကောင်းဖို့ အဓိကထား ထုတ်ပိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ကျန်းမာရေးဌာနကမှ ထောက်ခံထားတာမျိုး မရှိပါဘူး။ ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းမျိုးကို မိမိတို့ဘာသာ ဆန်းစစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
(၄) ပိုးသတ်ထားတဲ့ အ၀တ်နဲ့ ရှေ့နောက်အပေါ်အောက် သုတ်ပေးပါ
ရေမွေး၊ ဓာတုဓာတ်ပေါင်းတွေ ပါဝင်တဲ့ တစ်ရှူး/စက္ကူ စတာတွေ လုံးဝ မသုံးရပါ။ ပိုးသတ်ထားတဲ့ အ၀တ်နဲ့ ရှေ့နောက်အပေါ်အောက် သုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
(၅) ၀ါချည်စစ်စစ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ အတွင်းခံအထည်များကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ပါ
၀ါချည်နဲ့ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် အခြား ဓာတုဆေးတွေ မပါဝင်ပါဘူး။ အခြား စွပ်ကျယ်ကဲ့သို့သော ကုန်ကြမ်းတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အတွင်းခံတွေမှာ ဓာတုပစ္စည်း အမြောက်အများပါဝင်လို့ ဆိုးကျိူးကို ဖြစ်စေကြောင်း သတိပေးလိုက်ပါရစေ။
အမြိုးသမီးအင်ျဂါကို မလုပျသငျ့သညျ့အရာမြား (ကနျြးမာရေးအတှကျအရေးကွီးပါသညျ)
(၁) ပွှတျနဲ့ထိုးသှငျးပွီး ရမေဆေးရ
တဈခြို့က Douching Advice (ရပွှေတျကဲ့သို့သော)အရာမြားသုံးပွီး ယောနိအတှငျးပိုငျးကို ထိုးသှငျးကာ သနျ့ရှငျးရေးလုပျကွပါတယျ။ ပိုးသတျသနျ့စငျထားကွောငျး ကွငွောထားရငျလညျး အသုံးပွုဖို့ မသငျ့ပါဘူး။ သားအိမျအတှငျးပိုငျးဟာအရမျးနူးညံပွီး pH ပမာဏလှနျကဲတဲ့ ရနေဲ့ တှရေ့ငျ ပကျြဆီးတတျသလို အခွားဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှလေညျး ရှိပါတယျ။
(၂) လကျဖွဈဆေးဝါးမြား မသုံးရ
တဈခြို့တှကေ ရာသီလာတဲ့အခါမြိုးမှာ အင်ျဂါရောငျရမျးမှုကို သကျသာစဖေို့ ပေါငျးမွကျနဲ့ အုံခွငျး၊ လကျဖကျခွောကျအဖနျရညျနဲ့ ဆေးခွငျး၊ ရခေဲသှငျးခွငျးမြား လုပျတတျကွပါတယျ။ ဒါတှကေို လုံးဝ ရှောငျရှားရမယျဆိုတာာ အမြိုးသမီးတိုငျး သိစခေငျြပါတယျ
(၃) အရာဝတ်ထုမြားနဲ့ ကဉျြးမွောငျးအောငျ မပွုလုပျရ
လငျယောကျြားရဲ့ အလိုကိုလိုကျပွီး အရာဝတ်ထု၊ ဖော့၊ စက်ကူအစရှိတဲ့ ပစ်စညျးတှသေုံးပွီး လမျးကွောငျးကဉျြးမွောငျးအောငျလုပျခွငျး၊ ကြောကျခဉျြကဲ့သို့သော အရာမြား လိမျးခွငျးဟာ သားအိမျခေါငျးကငျဆာကိုတောငျ ဖွဈစနေိုငျသညျအထိ ဖွဈစပေါတယျ။
(၄) ပရဆေးမြား မသုံးရ
ပရဆေးတှနေဲ့ ဟုတျနိုးနိုးဖွငျ့ အင်ျဂါကို လိမျးခွငျး၊ မိမိဘာသာ တကျသလောကျ မှတျသလောကျ လုပျခွငျးတှကေို ရှောငျရပါမယျ။ ရောဂါဆိုးတှေ ပေးတဲ့အရာတှေ ဖွဈပါတယျ။
(၅) ဆကျဆံပွီး ခကျြခငျြးအပေါ့သှားခွငျးမပွုရ
ဆကျဆံပွီးတာနဲ့ ခကျြခငျြးအပေါ့သှားတာကို ရှောငျရှားရပါမယျ။ အကွောငျးကတော့ ဆီးထဲမှာ အန်တရာယျပေးနိုငျတဲ့ရောဂါပိုးတှေ ပါဝငျလို့ လကျလကျဆကျဆကျ ပှနျးပဲ့ဒဏျရာရထားတဲ့ လမျးကွောငျးကွှကျသားနဲ့ ထိတှရေ့ငျ ရောဂါရစနေိုငျပါတယျ။
ဘယျလို … သနျ့ရှငျးရေးလုပျရမလဲ … ?
(၁) pH ပမာဏ 4.5 ထကျမနညျး 8 ထကျမပိုသော Feminine Care Product မြားကို သုံးပါ
Feminine Care Product မြားကို ရှေးခယျြဝယျယူတဲ့အခါမှာလညျး ကနျြးမာရေးစံညှနျးနှငျ့ ကိုကျညီသော (ဥပမာ – pH Care ကဲ့သို့) ပစ်စညျးမြားကို ရှေးခယျြအသုံးပွုပါ။
(၂) ရနှေေးနဲ့ ဆေးပါ
ရနှေေးနဲ့ အပွငျကနေ သနျ့ရှငျးအောငျ ဆေးနိုငျပါတယျ။ ရပေနျးနဲ့ ခပျပွငျးပွငျးလေး ပနျးပွီးပေါ့။ လကျနဲ့မပှတျရငျတောငျအဲဒီနညျးက သနျ့ရှငျးစငျကွယျစပေါတယျ။
(၃) ကနျြးမာရေးညှနျးကိနျးနဲ့ လြှျောညီသော လစဉျသုံးပစ်စညျးကို သုံးပါ
အခြို့ပစ်စညျးတှဟော ရောငျးကောငျးဖို့ အဓိကထား ထုတျပိုးထားတာဖွဈပါတယျ။ ဘယျကနျြးမာရေးဌာနကမှ ထောကျခံထားတာမြိုး မရှိပါဘူး။ ဒီလိုမြိုးပစ်စညျးမြိုးကို မိမိတို့ဘာသာ ဆနျးစဈဖို့ လိုပါတယျ
(၄) ပိုးသတျထားတဲ့ အဝတျနဲ့ ရှနေ့ောကျအပျေါအောကျ သုတျပေးပါ
ရမှေေး၊ ဓာတုဓာတျပေါငျးတှေ ပါဝငျတဲ့ တဈရှူး/စက်ကူ စတာတှေ လုံးဝ မသုံးရပါ။ ပိုးသတျထားတဲ့ အဝတျနဲ့ ရှနေ့ောကျအပျေါအောကျ သုတျပေးနိုငျပါတယျ။
(၅) ဝါခညျြစဈစဈနဲ့ပွုလုပျထားတဲ့ အတှငျးခံအထညျမြားကို ရှေးခယျြဝတျဆငျပါ
ဝါခညျြနဲ့ပွုလုပျထားခွငျးကွောငျ့ အခွား ဓာတုဆေးတှေ မပါဝငျပါဘူး။ အခွား စှပျကယျြကဲ့သို့သော ကုနျကွမျးတှနေဲ့ထုတျလုပျထားတဲ့ အတှငျးခံတှမှော ဓာတုပစ်စညျး အမွောကျအမြားပါဝငျလို့ ဆိုးကြိူးကို ဖွဈစကွေောငျး သတိပေးလိုကျပါရစေ။